नेपाल सुपर लिग : लिग चरणको समाप्तिमा काठमाडौं शीर्षमा- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
नेपाल सुपर लिग : लिग चरणको समाप्तिमा काठमाडौं शीर्षमा
काठमाडौँ — नेपाल सुपर लिगको लिग चरणको समाप्तिमा काठमाडौंं रेजर्सले आइतबार शीर्ष स्थान कब्जा गरेको छ । दशरथ रंगशालामा भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा काठमाडौंले एफसी चितवनलाई २–१ ले हरायो । यो जितपछि काठमाडौंको छ खेलबाट १३ अंक भएको छ र धनगढी एफसीलाई उछिनेर पहिलो स्थानमा पुगेको हो ।
काठमाडौं लिग चरणमा चार जित निकाल्ने एक मात्र टिम पनि रह्यो । अर्कोतर्फ चितवन भने जितहीन एक मात्र टिम रह्यो र खालि दुई अंकमा अन्तिम स्थानमा रह्यो । उसले छ खेलमा कुनै पनि जित निकाल्न सकेन । चिवतन चार खेलमा पराजित रह्यो भने दुई खेलमा बराबरीमा रोकियो ।
काठमाडौंको जितमा मेसुके ओलेमोयु र संजोक राईले एक एक गोल गरे । क्यामरुनी खेलाडी ओलेमोयुले १७ औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेयता संयोकले ३४ औं मिनेटमा दोस्रो गोल थपे । चितवनका तर्फबाट राजीव लोप्चानले ४० औं मिनेटमा एक गोल फर्काए र यो प्रतियोगिताको ५० औं गोल रह्यो ।
प्रतियोगिताको प्लेअफमा काठमाडौं, धनगढी, ललितपुर सिटी एफसी र बुटवल लुम्बिनी एफसी पुगेका छन् भने पोखरा थन्डर्स, विराटनगर सिटी एफसी र चितवनको चुनौती लिग चरणमै समाप्त भयो । अब प्रतियोगितामा प्लेअफका खेल सुरु हुनेछन् । मंगलबार काठमाडौं र धनगढीबीच खेल हुनेछ । यो खेलको विजेताले सिधै फाइनलमा प्रवेश पाउनेछ ।
यस्तै बुधबार ललितपुर र बुटवल लुम्बिनीबीच खेल हुनेछ र यसको विजेताले पहिलो प्लेअफमा पराजित टिमसँग बिहीबार खेल्नेछ । यस इलिमिनेटरमा पराजित टिम प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछ । प्लेअफको अन्तिम खेलका विजेताले फाइनल खेल्नेछ ।
फाइनल शनिबार हुनेछ ।
काठमाडौं ६ ४ १ १ ९–८ १३
धनगढी ६ ३ १ २ ८–५ १०
ललितपुर ६ २ ३ १ ७–३ ९
बुटवल लुम्बिनी ६ २ २ २ ७–६ ८
पोखरा ६ २ २ २ ३–४ ८
विराटनगर ६ २ १ ३ ११–१२ ७
चितवन ६ – २ ४ ५–१२ २
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ १९:२९
वैशाख २६, २०७८ मधु शाही
बाँके — कोहलपुरस्थित नेपालगन्ज मेडिक शिक्षण अस्पतालमा आइतबार अक्सिजन लिक्वीड आइपुगेपछि बिरामी भर्ना सुरु गरिएको छ । उक्त अस्पतालमा अक्सिजन अभावमा एक सातादेखि बिरामी भर्ना रोकिएको थियो ।
‘अहिले केही बिरामी भर्ना गर्न सुरु गरेका छौं’, अस्पतालका उपनिर्देशक डा. दिनेश श्रेष्ठ ले भने,‘यद्यपि यति अक्सिजन प्रयाप्त होइन ।’ उनका अनुसार विरगन्ज नाका हुँदै भारतको जम्सेदपुरबाट एक ट्यांक लिक्वीट अक्सीजन आइतबार दिउँसो अस्पतालमा आइपुगको छ । एक ट्यांकर लिक्वीट अक्सिजन पाँच दिनसम्म पुग्न सक्ने उनले बताए ।
'हरेक १५/१५ दिनमा एक ट्र्यांकर लिक्वीड अक्सिजन ल्याउने कुरा छ । तर, भारतले नियमित दियो भने समस्या हुँदैन,' डा. श्रेष्ठले भने ।
ब्राजिलको उपाधिरक्षा अभियान सुरु
पाँच गोलको रोमाञ्चक खेलमा युक्रेनमाथि नेदरल्यान्ड्सको जित